हामी नेपालीले दुनियाँका सबैभन्दा पछिल्लो विकासको लहर देखेका मात्र छैनौं, आफ्नै र'गत र पसिनाले बनाएका पनि छौं। कतारका रंगशालादेखि चीनका पूर्वाधारमा समेत हाम्रो सीप र ज्ञान र मेहनत फैलिएको छ। धेरै अमेरिकी विश्वविद्यालयमा नेपाली प्राध्यापकहरू उत्कृष्ट विद्यार्थी उत्पादनमा लागिपरेका छन्। मंगल ग्रहमा पानी पत्ता लगाएका छन्।
तर दुर्भाग्य! मंगल ग्रहमा पानी भेट्ने, चीनमा विकास गर्न सक्ने, अमेरिकामा योगदान गर्न सक्ने अनि कतार, दुबई, कोरियामा र'गत-पसिना बगाउन सक्ने नेपालीको विश्वास जित्ने काम हाम्रै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। पूरा हुन नसकेका आशा र त्यसले उत्पन्न निराशाका मुख्य कारण हाम्रै सरकारहरूको अकर्मण्यता हो। त्यसपछि हामी नागरिक।
हरेक देशका आफ्नै समस्या हुन्छन्। दोश्रो विश्व यु'द्ध सकिएपछि जर्मनीले कसरी आफ्नो विका़सको सुरूआत गर्यो? जापानले कसरी तहसनहस भएको अर्थतन्त्र उठायो? के नेपाल पनि कुनै चामत्कारिक विकासको बाटोमा दौडिन सक्छ?
दोश्रो विश्वयु'द्ध सकिएको तीन वर्षसम्म जर्मनीमा राष्ट्रिय सरकारसमेत थिएन। जापानको हालत त्यस्तै कमजोर थियो। अहिलेको दुबई, कतारमा खाने अन्न थिएन। हामीले केही साना कुरा मात्र ध्यान दिने हो भने निकै छिटो प्रगति पथमा लम्कन सकिन्छ।
सन् १९९० दशकमा रुवाण्डामा शताब्दीकै ठूलो नरसं'हार भयो। सय दिनमा झन्डै १० लाख मानिसले ज्यान गुमाए। तुत्सी समुदाय झन्डै सखाप भए। त्यसपछि बनेको पास्टर बिजिमुन्गुको सरकारले सन् २००३ सम्म केही गर्न सकेन। समस्या जस्ताका त्यस्तै रहे।
हरेक वर्ष भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा नेपालले नाम लेखाउँदै छ। सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्छ तर खोई आयल निगमका जग्गा काण्डका दोषीलाई का'रबाही गरेको? खै वाइड बडीका दोषी? कहाँ गए मेलम्चीका ठेकेदार? किन अख्तियारकै आयुक्तले घुस मागेको भिडियो बाहिरिँदा समेत प'क्राउ परेनन्? सामान्य कर्मचारी भएको भए यति घुस रकमसहित रंगेहात भन्दै सोही दिन प'क्राउ पर्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको म केही गर्दिनँ तर मेरा आफ्नाले गरेको हेर्दै हेर्दिनँ भन्नुभएको पक्कै होइन होला। लाखौं नेपालीलाई घोच्ने गरी स्विस बैंकको काण्ड आयो, सरकारमा बसेकालाई घोचेन। वाइडबडी काण्ड भयो। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा समेत उक्त खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको र भ्र'ष्टाचार भएको समाचार आए तर नेपालमा अख्तियारले एक जनासमेत दोषी देखेन। उल्टो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत चुपचाप भयो, घटना सामसुम भयो।
भ्र'ष्टाचारको जालो यहाँसम्म छ, भ्र'ष्टाचारको विरोध गरेर अख्तियारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विवेकशील साझा पार्टीका पाँच जनालाई कार्यालयको ढोकासम्म पनि जान दिइएन। भ्र'ष्टाचार कारबाहीको त कुरा छाडौं, भ्र'ष्टाचार भयो भनेर सम्बन्धित निकायसम्म जान पनि नपाइने?
सरकारले साँच्चै जनताको विश्वास जित्ने हो भने पहिला ठूला भ्र'ष्टाचारीलाई समाएर जेल हाल्नुपर्ने हो। विश्वका धेरै राष्ट्रले लागू गरेको आम्दानीअनुसारको मात्र खर्च गर्न पाउने र सबै ठूला खरिदमा आम्दानीको श्रोत खुलाउने व्यवस्था गर्न सके मात्र पनि निकै सम्हालिन्थ्यो भ्र'ष्टाचार।
मासिक ३५ हजार आम्दानी हुने जोकोहीले ४० लाख आनाको मूल्य पर्ने जग्गा खरिद कसरी गर्छ? ६० लाखको सवारी कसरी चढ्छ? अनि बैंक वा सहकारीमा लाखौँ जम्मा कसरी गर्छ? अदालतले प्रमाण पुगेन भनेर निर्दोष साबित गरेपछि कसरी घट्छ भ्र'ष्टाचार? आम्दानीको स्रोतभन्दा बढीको खरिदमा अनुसन्धान गर्ने हो भने धेरै जनता देखासिकीको चपेटामा पनि पर्ने थिएनन्, भ्र'ष्टाचार पनि कम हुने थियो।
भ्र'ष्टाचारबिनाको चुस्त सरकार पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार हो। जब पूर्वाधार विकास हुन थाल्छ तब सहर, गाउँमा बस्ने सबैले शिक्षा, स्वास्थ्य, बजार अनि रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन्।